Low fps na elu ọgwụgwụ pc
Low fps na elu ọgwụgwụ pc 3 afọ 1 ọnwa gara aga #621
Nnọọ! M na-adịbeghị anya wuru kọmputa ọhụrụ ma arụnyere FSX. Enwere m obere addons ugbu a (na kọmputa ochie enwere ọtụtụ freeware addons) mana ana m eche ihe kpatara na fps m pere mpe n'agbanyeghị ezigbo kọmputa dị mma (gburugburu 20fps). Biko ị nwere ike ịnyere m aka?
N'ezie, ụdịdị nke kọmputa
CPU: AMD Ryzen 1700X (bụghị overclocked)
Ram: G Usọ Ripjaws V Series 16GB DDR4 3200MHz
M na-eche na e nwere ihe ndị kasị mkpa ka mara ma na-ajụ m ma ọ bụrụ na m na-ekpuchi ihe.
Low fps na elu ọgwụgwụ pc 3 afọ 1 ọnwa gara aga #623
E nwere ihe ole na ole i nwere ike ime. The #1 saịtị m na-eji iji, n'ụzọ dị mwute bụ agaghịkwa gburugburu
ihe mbụ m ga-eme, n'eziokwu, bụ dochie UIAutomationCore.dll file. M na-adịghị ọbụna na-echeta ebe m nwetara My nnọchi faịlụ si.
Nke a nwere ike inyere aka: steamcommunity.com/app/314160/discussions/0/530646080866079080/
Low fps na elu ọgwụgwụ pc 3 afọ 1 ọnwa gara aga #624
Enweelarịrị m UIAutomationCore. dll mana enwere m ike ịnwale ọnụ na Steam ahụ. Daalụ. Site n'ụzọ m ehichapụ fsx.cfg n'ihi na akpọwo m ya ma ugbu a, m na-etinye ụfọdụ tweaks ma ọ dịworị aka ugbu a.
Low fps na elu ọgwụgwụ pc 3 afọ 1 ọnwa gara aga #625
Ofu ya! M nnọọ hụrụ ezi itule n'etiti sliders na ọbụna m etinye ụfọdụ sliders ala ya ka anya ka mma karịa na ntọala na m nwere na mbụ. Nke ahụ na-akpa ọchị
Low fps na elu ọgwụgwụ pc 3 afọ 1 ọnwa gara aga #629
Always n'anya a obi ụtọ!
Acha ANỤNỤ mbara igwe!
Oge ike page: 2.889 sekọnd